လက်ပံတောင်း စီမံကိန်းကိစ္စ တရုတ်သံရုံး ကြေညာချက်ထုတ် | ဧရာဝတီ
လက်ပံတောင်း စီမံကိန်းကိစ္စ တရုတ်သံရုံး ကြေညာချက်ထုတ်
| November 30, 2012 | Hits:1
| | မြန်မာပြည်တွင်း အဖက်ဖက်က မြန်မာ့ ဥပဒေမျာကို လေးစားမှု အခြေခံ၍ လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်း အဆင်ပြေစွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အကျိုးရှိသော အခြေအနေ တည်ဆောက်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံးက အရေးပေါ်ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ မုံရွာကြေးနီစီမံကိန်းသည် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အချင်းချင်း အကျိုးရှိစွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရွှေပြောင်းမှု လျှော်ကြေးငွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးဝင်ငွေခွဲခြားရေးများကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဆွေးနွေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားသည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> ရာဇာ November 30, 2012 - 1:02 pm	ကြေငြာချက် ဆိုတာ ပါးစပ်ထဲရှိရာ ချရေးလို့ ရတဲ့ ဟာဘဲ….တကယ်မှန်တယ် ဆိုရင် စာချုပ်မိတ္တူ တွေပါ ကူးပြီး ပြည်သူကို ပြသင့်တယ်…
Reply	Ngal Hriang December 1, 2012 - 2:34 pm	Really? Communist China may never care about the livelihood of the people effected by copper mine project. We have already seen it enough. Atheist China must leave us alone. And all the generals involved in this project betrayed us and they must be charged and put on trial.